ခ်ီးမြမ္းျခင္း | Rev.U Min Lwin
All posts tagged ခ်ီးမြမ္းျခင္း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 02/09/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ခ်ီးမြမ္းျခင္း.	3 Comments
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင် တွေမှာ ထောင်မှူးက အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဒဏ်ရာ တွေကို ဆေးကြောပေးပြီး သူရဲ့ အိမ်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ စားကောင်း သောက်ကောင်း တွေနဲ့ ဧည့်ခံတယ် ဆိုတဲ့ ထောင်မျိုး သင်ကြားဖူးပါ သလား။ နောက်ပြီး ထောင်တံခါးတွေက သူ့အလိုလို ပွင့်သွားပြီး ဘယ်တစ်ဦး တစ်ယောက် ကမျှ သော့မဖွင့်ပေးဘဲ ထောင်သားတွေကို ချည်နှောင် ထားတဲ့ သံကြိုးတွေ အလိုလို ပွင့်သွား တယ်ဆိုတဲ့ ထောင်မျိုးကော သင်ကြားဖူး ပါသလား။ ကောင်းပြီ။ ဒါဟာ တမန်တော် ၀တ္ထု အခန်းကြီး ၁၆ မှာ ပေါ လုနဲ့ သိလ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် တဲ့ သူတို့ရဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအရာဟာ ချီးမွမ်းခြင်း တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။
တမန်တော် ( ၁၆း၁၀ ) မှာ ဘုရားသခင်က ပေါလုကို မာကေဒေါနိပြည်ကို သွားဖို့အတွက် တိတိကျကျ ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ပေါလုကလည်း နာခံခြင်းနဲ့ သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမြို့ကို ရောက်တဲ့အခါ ပေါလုနဲ့ သိလတို့ဟာ မိန်းကလေး တစ်ဦးထံမှ နတ်ဆိုးကို နှင်ထုတ် ပေးခဲ့တယ်။ “ဒီမိန်းကလေးရဲ့ သခင်တွေ က ပေါလုနဲ့ သိလကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပြီး လက်ဆောင်တွေ ပေးမယ်လို့ ထင်ပါလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူ့ရဲ့သခင်က အစိုးရမင်း ရုံးကို သွားပြီး သူတို့နှစ်ယာက်ကို တိုင် တန်းခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီကျွန်မ မိန်းကလေးအားဖြင့် ငွေများများ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပျက်စီးသွားလို့ ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပေါလုနဲ့ သိလတို့ဟာ အရိုက်အနှက် ခံရပြီး ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားခြင်းပါ ခံခဲ့ရတယ်။ ထောင်တဲ့လား . . .။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် သူတို့ကို မာကေဒေါနိ ပြည်ကို စေလွှတ် ခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ပေါလုနဲ့သိလတို့က ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားကို နာခံခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒါဆို ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့စကား နာခံနေရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့် ထောင်ထဲမှာ အဆုံးသတ် စေရ တာလဲ။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး တွေ့ကြုံခဲ့ရင် ဘုရားသခင်ကို ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကနေ ထွက်လာမဲ့ စကားတွေကတော့ – ဘုရားသခင်. . . ကျွန်တော် ကိုယ်တော့် စကားနာခံခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် အရိုက်ခံရတာလဲ၊ မမှန်ဘဲနဲ့ ဘာကြောင့် အစွပ်စွဲခံရတာလဲ။ ကိုယ်တော် ဘာကြောင့် ဒီမှာ ဒီလိုမျိုး တွေ့ကြုံ ခံစားစေရတာလဲ . . . ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေဘဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ပေါလုနဲ့ သိလ တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြည့်ရအောင်။
“သန်းခေါင် ချိန်၌ ပေါလုနှင့်သိလတို့သည် ပဌနာပြု၍ ဘု ရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် သီးခြင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲမှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကို ခံရသောသူတို့ သည် နားထောင်ကြ၏။” (တမန်တော် ၁၆း၂၅ )
သိပ်ဟုတ်တာပေါ့။ သူတို့တွေ ဘုရားသခင်ကို သန်ခေါင်ယံချိန်မှာ ချီးမွမ်းသီးချင်း သီဆိုပြီး ဆုတောင်း နေကြတယ်။ သူတို့ဟာ ဟိုဒီထိုင်ပြီး ထွက်ပြေးဖို့ လမ်းစကို ရှာမနေကြပါ ဘူး။ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲပြီး မာကေဒေါနိ ပြည်ကို လာရတဲ့အတွက် နောင်တရမနေကြပါဘူး။ ထောင်ထဲကို ရောက်ရခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို အပြစ် တင်မနေပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ဟာ သူတို့အပေါ်မှာ ကောင်းမြတ် တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေကြလို့ ဖြစ်တယ်။ အဲ ဒီအစား သူတို့ဟာ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း သီချင်းဆိုပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်။
အခန်းငယ် ၂၆ မှာဆိုရင် ဘုရားသခင် က ထောင်မြေပြင်ကို ပြင်းစွာလှုပ်စေပြီး ထောင် တံခါးအားလုံးကိုလည်း ပွင့်စေကာ ထောင်သား များအားလုံးကို ချည်ထားတဲ့ သံကြိုးတွေမှလည်း လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ဖို့ရန် ထွက်ပြေးလို့ ရပေမယ့် သူတို့တွေဟာ ရှိနေတဲ့ နေရာကနေ ဘယ်ကိုမှ ရွေ့မသွား ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပေါလုက အားလုံးကို ပြောထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ် (အငယ် ၂၉)။ သို့မဟုတ် မယုံကြည်သူ ထောင် သားတွေဟာ ပေါလုနဲ့ သိလတို့ရဲ့ ချီးမွမ်းသီ ချင်းဆိုခြင်းကို ဘုရားသခင် ကြားတယ်ဆိုတာ ကိုသိပြီး ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံကြလို့ဖြစ် နိုင်တယ်။ ထောင်သားတွေဟာ ဒီလူနှစ်ယောက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားမှု တစ်စုံတစ်ခုရှိတယ် ဆိုတာကို မသိဘဲ နေမှာမဟုတ်ကြပါဘူး။ အ သေအချာ သိနေကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ထောင်တံခါးတွေက သူ့အလိုလိုပွင့် သွားပြီး ထောင်သားတွေကို ချည်နှောင်ထားတဲ့ သံကြိုးတွေလည်း အလိုလို ပြုတ်ထွက်သွားရ တာလဲ။ ဒါဟာ ချီးမွမ်းခြင်း တန်ခိုးတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ချီးမွမ်းခြင်းက လွတ်မြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်မြောက်ခြင်းသာမက ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ပို၍ပုံဆောင်ထားခြင်း ဖြစ် တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက သင့်ရဲ့ရန်သူကို ချစ် ပါလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကို လိုက်လျှောက်ဖို့ ရန် အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မကြာမကြာဆိုသလို ကျွန်မတို့ တွေ့မြင် လာတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေး အတွက် ကလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေး ရေး အခက်အခဲတွေ ကြောင့် ၀န်ပိနေတဲ့အခါ ပြုံးရယ်နေဖို့ အရမ်း ခက်ခဲတဲ့ အရာ ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ စိုးရိမ်ခြင်းများနဲ့ နာကျင်မှု တွေမှ လွတ်မြောက် စေနိုင်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ခွင့်ပြု လက်ခံပြီး ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လို တုန့် ပြန်မှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြည့် ပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတာထက် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နှလုံးသား တွေကို ချီးမွမ်းခြင်းတွေ နဲ့ ပြည့်စေမယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော် တို့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ဆောင် ပေး မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဘယ်တုန်းကမှ တွေးမထားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ဘုရားသခင် က ပြင်ဆင် ပေးမှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မမြင်ရတဲ့ ချည်နှောင်ထားတဲ့ သံကြိုးတွေထဲကလည်း လွတ်မြောက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်။
တစ်ကယ်လို့ ထောင်မှူးဟာ ထောင်သားတွေကို လွတ်သွား စေတယ်ဆိုရင် ထောင်သားတွေ ခံရမယ့် အပြစ် ဒဏ်ကို ထောင်မှူးက ကိုယ် စားခံရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေတစ်ခု ရောမမှာ ရှိ တယ်။ တမန်တော် အခန်းကြီး ၁၆ မှာ တွေ့ ရတဲ့ ထောင်မှူးဟာ ထောင်သားတွေ လွတ် မြောက်သွားတယ် ဆိုတာကို အစိုးရမင်းတွေ သိသွားရင် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းပြီး အသတ်ခံရ တာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ရန် (အ ငယ် ၂၇) ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လက် စားချေချင်တဲ့ စိတ်ရှိပြီး စာနာစိတ် မရှိတဲ့ ထောင်သား တစ် ယောက်က ထောင်မှူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ ကြိုးစားတာကို တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင် သတ်သေဖို့ အလိုရှိခဲ့မှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် ပေါလုက အဲ့ဒီလိုမျိုး လူစားထဲက မဟုတ်ပါ ဘူး။ အဲဒီအစား ပေါလုက ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်အောင် မလုပ် ပါနဲ့ ငါတို့တွေ ဒီမှာရှိကြပါတယ်လို့ ထောင်မှူးကို ပြောလိုက်တယ်။ ပေါလုက ထောင်မှူး ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ရုံမျှမက ခရစ်တော်၌ ထာဝရအသက်ကို ရရှိဖို့ရန် ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်(အငယ် ၃၄)။
ရှင်ပေါလုက အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ့် အတွက်ဘဲ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။“ဝေး. . ဟေး ထောင်တံခါးတွေ ပွင့်သွားပြီ ထောင်ထဲက ထွက်ပြေးကြရအောင်ဟေ့ . .”။ အဲဒီလို မပြော ခဲ့ပါဘူး။ ပေါလုဟာ ရောမနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ပညာတတ် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူက ရောမ ဥပဒေအရ ထောင်သားတွေ လွတ်သွားရင် ထောင်မှုး ခံရမယ့် နောက် ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် ကိုလည်း သိနားလည်တဲ့ သူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ထောင်မှုး အပေါ် အာရုံစိုက် ထား တယ်။ ထောင်မှုးကို ပြောလိုက်တဲ့ ပေါလု ရဲ့ အဖြေစကားဟာ “ငါ ဒီထောင်ထဲမှာ ကြာ ကြာဆက်နေပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါလုအတွက် အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဓိက အရေးကြီးဆုံးက ထောင်မှုး ရဲ့ အသက်ပါဘဲ။ ဒါက ချီးမွမ်းခြင်း ရဲ့ တန်ခိုးပါဘဲ။ ချီးမွမ်းခြင်းက ကိုယ့်အတွက် စဉ်းစားမှုတွေကနေ သူများတွေ အတွက် ဆင် ခြင်တတ်သော နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲစေပါ တယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ် တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ သူဖြစ်တယ်။ ”ကျွန်တော်တို့က ကိုယ် တော်ကိုတော့ ချစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြား သူတွေကိုတော့ မချစ်နိုင်ပါဘူး” ဒီလိုပြောလို့ မရပါဘူး။
အချိန်က သန်းခေါင်ယံ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထောင်မှုးဟာ နမိတ်လက္ခဏာကို ကိုယ်တွေ့ မြင်တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ပေါလုနဲ့ သိလတို့ရဲ့ သတင်းစကားကို ကြားနာပြီး ယုံ ကြည်ခဲ့တယ်။ ထောင်မှုးဟာ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဒဏ်ရာများကို ဆေးကြောပေးပြီး မိမိအိမ်ကို ခေါ်သွားကာ ကျွေးမွေး ဧည်ခံခဲ့တယ်။ တမန် တော် ၁၆း၃၄ မှာ ထောင်မှုးဟာ ၀မ်းမြောက် ခြင်းကို ပြည့်ဝစွာ ခံစားရတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူဟာ ဘုရား သခင် ကို သိမြင်လာလို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါက ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ချီးမွမ်းခြင်းက ဘုရား သခင် ရဲ့ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက် သာ အာရုံစူးစိုက်မနေဘဲ ဘုရား သခင်နဲ့ အခြား သောသူများအတွက် စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုရင် ဘု ရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသော သူ တွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာဖြင့် အ ခြားသူများကိုလည်း ဘုရားသခင်ထံကို ခေါ် ဆောင်လာနိုင်သော သူများ ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံ တဲ့အ ခါ သင်ဘယ်လို တုန့်ပြန်လေ့ရှိသလဲ။ သင် ကိုယ်တိုင်လည်း ပေါလုနဲ့ သိလ တို့ရဲ့ အသက် တာလိုဘဲ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် ကိုး ကွယ်ခြင်းရှိတဲ့ အသက်တာကို ရွေးချယ်ချင်ပါ သလား။ ဘုရားသခင်က ပေါလုနဲ့ သိလတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သလိုဘဲ သင့်ကိုလည်း သူ့ရဲ့တန် ခိုးကြီးသော လက်တော်နဲ့ ကယ်တင်မယ်ဆိုတာ ကို သင်ယုံ ကြည်ပါသလား။ ထိုကဲ့သို့သော အခက်ခဲများကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ထင် ရှားစေဖို့ အသုံးပြုပြီး အခြားသောသူများ ပြောင်းလဲလာသော အသက်တာများကို တွေ့ မြင်လာဖို့ရန် ရွေးချယ်ချင်ပါသလား။ ဒါဆိုရင် ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းခြင်းကို ရွေး ချယ်ခြင်းဖြင့် အမှုတော်ထဲမှာ ဘုရားသခင် ရဲ့တန်းခိုး တော် ကို လက်တွေ့ခံစားလိုက်ပါ။